हैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ ? कुखुराको भाले मर्दा पनि दिनभर चक्काजाम ! « paniphoto
« ‘घुस, भष्ट्राचार र अपराधका मुद्दामा फसाईदैछ मधेसीलाई ।’ राजधानीमै बम पड्क्यो ! »	हैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ ? कुखुराको भाले मर्दा पनि दिनभर चक्काजाम !
By -पानीफोटो- on Tuesday February 28, 2012	पहिले चक्काजामको क्या चार्म थियो । दिनभर चक्काजाम गर्नेहरु निकै बलिया संगठन मानिन्थे । एकदिन मात्रै चक्काजाम गरे कत्रो दबाब दिएको मानिन्थ्यो । तर आजभोली ? आजभोली त जोसुकै ऐरेगैरेले पनि जेसुकै कुरामा चक्काजाम गरिदिने । चक्काजामले दुख दिने बाहेक आजभोली कुनै चमत्कार गर्न सक्दैन । त्यैपनि मुर्खहरु चक्काजाम गरिरहन्छन् । बहाना पनि कस्ता कस्ता हुन थालेका छन्, प्युठानमा भएको एउटा घटना सुन्नुस् न ।
सुन्दै पनि दिक्क लाग्ने । कुखुराको भाले मर्‍यो रे अनि दिनभर चक्काजाम । बहाना पनि कत्रो, आँगनको बाटोमा हिड्ने गाडीले गाउँको भाले मारेर भाग्यो भनेर चक्काजाम रे । दुईचार जना भेला भईगए । स्थानिय हुनुको तागत देखाउँन सारा यात्रुलाई दुख दिए । ल हेर्नुहोस् न तिनीहरुको बुद्धि । आईतबार दिउँसो रोल्पाको होलेरी हुँदै प्यूठानको स्वर्गद्वारी जाने एउटा जिपले प्युठानमै एउटा कुखुरा किचेर मारेर गएछ । साँझमा घर फर्किएकी कुखुराकी धनीले कुखुरा मरेका चाल पाईछिन् । अनि फर्केर आउँने यही बाटो त हो नि भनेर भोलीपल्ट बाटो नै जाम गरेर बसेछन् । कच्ची सडकमा उनीहरुले केही काठ दाउरा तेर्स्याए । अनि त्यसमाथि मरेको भाले राखे । त्यसमाथि एउटा ढुङ्गा राखे र त्यसमा लेखिएको थियो गाडी नम्बर अर्थात् ‘९९०३’ । आउनेजाने गाडी त्यहीं रोकिए । (स्रोत) तस्विर साभार : नागरिकन्युज डट कम
गर्नेले त चक्काजाम गरिदियो, बस् भइगयो । तर कहाँका मान्छे बाटैमा कहाँ अड्किनु पर्दाको हालत के हुन्छ, यसको वास्ता कसलाई ? तिनीहरु त चक्काजाम नै गरियो भनेर ठुलै बहादुरी गरे जस्तो दंग परेका होलान् । तर, संसारले तिनलाई मुर्ख मानेर हाँसेको थाहा पाउँलान् कि नपाउँलान् ? विस्तृत समाचार यहाँ पढ्नुहोस् Tweet
« ‘घुस, भष्ट्राचार र अपराधका मुद्दामा फसाईदैछ मधेसीलाई ।’ राजधानीमै बम पड्क्यो ! »	6 comments to हैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ ? कुखुराको भाले मर्दा पनि दिनभर चक्काजाम !
· जवाफ दिनुहोस्	हेर्नुहोस् यसमा दुइृ कुरा छन् । एक त यो घोर कलियुग हो यहाँ यस्तै उट्फट्याङका कामहरुमात्र टिक्छन् । अर्को यो नेपाल हो । कानुन नै गतिलो छैन ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Nirmal Baral
· जवाफ दिनुहोस्	हे राम देख्न बाँकी पनि अब केही भएन । लाज पचेका हरु ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	hema moktan
· जवाफ दिनुहोस्	तिनीहरु त चक्काजाम नै गरियो भनेर ठुलै बहादुरी गरे जस्तो दंग परेका होलान् । तर, संसारले तिनलाई मुर्ख मानेर हाँसेको थाहा पाउँलान् कि नपाउँलान् ?
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	अभिषेक
· जवाफ दिनुहोस्	कलियुग । घोर कलियुग ।
· जवाफ दिनुहोस्	Khurapati Thauma kanun bhayepani lagu hudaina yo ta sadharan bhaihaloni neta gatilo hunu paro ani kanun banaunu paro ani lagu hunu paro natra sadhai yasto bhairanchha.
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Indradev Rai Lalitpur-14 Now Mozambique
· जवाफ दिनुहोस्	Tyasaile m bhan6u yo loktantra hoina 6adatantra ho.Yaha jasle j gare pani bhakai 6,karbahi garne kasle?Sabai bathai batha hunu ra kamjor kanunko parinam ho.